HERO OF MYANMAR: ဒီမိုငတုံးများပြောသော လူဗြိန်းအတွေးများ
[15:00 |0ဦးကဆွေးနွေးသွားပါတယ်.. ]
မြန်မာနိုင်ငံ က အတိုက်အခံတွေက ပြောတော့ တာ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ပြောတာပါ ။တကယ်တမ်းအနစ်နာခံပြီးတိုင်း
ပြည်ကို တိုးတက်အောင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လို စိတ် နည်းနည်းတောင် မရှိကျပါဘူး။အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဟီလာ၇ီကလင်တန်
ဟာ သမ္မတ မဖြစ်ခဲ့ ပေမဲ့ လက်ရှိအချိန်မှာ အိုဘားမားလက်အောက် တာဝန်ကျွေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နေတာ တကမ္ဘာလုံးအသိ
ပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ငါသာလျင် အရေးပါးဆုံးလူဆိုပြီး အမောက်ထောင်ပြချင်ကျတဲ့သူတွေ က အများသားပါ.....။
ဒီတော့မြန်မာနိုင်ငံမတိုးတက်တဲ့အထဲမှာ သူများသာ အနာလို စိတ်၇ှိနေ ကျတာ အဓိက အချက်ပါ။ကောင်းမှု့ ကုသိုလ်လုပ်ရင် လည်း အပြောခံရတဲ့အထဲမှာ နည်းနည်းလေးတောင် ဘောင်မလွတ်ပါဘူး။ပြောခံရတာပါပဲ။နာဂစ်ဖြစ်တော့ 
အတိုက် အခံတွေ ဘယ်လို ငြီးသလဲ ဆိုရင် ဖြစ်မှာပေါ့။တိုင်းပြည် မင်းလုပ် အုပ်ချူပ်နေတဲ့ သူတွေက မှ ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ မှန်မှန်ကန်ကန် မအုပ်ချူပ်တာ။မိုးလေ၀သ မမှန်ရင် ။ဟင် မင်းဆိုးမင်းညစ်ကြောင့် ။ေ၇ကြီးရင် ဟင် သူတို့ ကြောင့် ။မိုးသဲရင် ဟင်သု့ 
တို့ ကြောင့် ပဲ။ပြောလို့ ကို မပြီးတော့ ဘူး။ဦးနှောက်မရှိတဲ့ဒီအဆိုတွေ အတိုင်းသာဆိုရင် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယိုးဒယားနိုင်ငံ
ဟာလည်း မင်းဆိုးမင်ညစ် ကြောင့် ၊ဒါမှမဟုတ် ၀န်ကြီးချူပ် အသစ်ကြောင့် လို့ငဘပြောရင် မနာကျေးလို့ သာပြောပါရစေ။
ဒီအတွေးကို အစပြုပေးခဲ့ သော ပြည်ပရောက်ဒေါ်လာစားအတိုက်အခံများကိုလည်း ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်း.......။
ယိုးဒယားနိုင်ငံ ရေကြီးမှု့ သည် ယိုးဒယားနိုင်ငံ မင်းများ။(သို့ တည်းမဟုတ်) ၀န်ချူပ်ချူပ်အသစ်ကြောင့် 
ဖြစ်ပါကြောင်း .....................ဦးနှောက်မရှိစွာ ပြောရဲဆိုရဲ သော မြန်မာ့ ဒီမိုတောင်းစားများထံမှ သတင်းရရှိ
ယိုးဒယားနိုင်ရေကြီးမှု့မြင်ကွင်းများ link
စာလုံးတောင် ဘယ်လို ပေါင်းထားမှန်းမသိတဲ့သူများယောင်လို လိုက်ယောင်တဲ့ဒီမိုငတုံးများ လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းနာမည်ပေးထားတဲ့ လူတွေကို လမ်းဘေးခြေနင်းဖက် မှာ တန်းစီချတာ ဘယ်သူတွေလဲ?? အစီအစဉ်မကျ၊မဟုတ်တရုတ် ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တောင်းစားနေသူများ ကရင်အိကျီမချွတ်တဲ့...၊ ကရင်လူမျိုးတွေကို အရမ်းချစ်တဲ့ ကရင်မလေးက ဘာလို့ကရင်ပြည်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ သွားနေရတာလဲ?? ဒီလူတွေက မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေလား?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချစ်တဲ့ လူတွေလား?? သူတို့ဝတ်ထားတဲ့ ဝတ်စုံဒီဇိုင်းက ကရင်ပုံပေါက်ရဲ့လား?? နိုင်ငံခြားရောက်နေတာကို ခုမှ ဘာလို့ ကရင်ဝတ်စုံက ဝတ်ချင်ရတာလဲ?? ကရင်လူမျိုးကို သိပ်ချင်တဲ့ ဒီကရင်တွေကို ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ဘယ်သူအတင်းနေခိုင်းတာလဲ ဒီလူတွေက ဘယ်နိုင်ငံက ဘာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေလဲ?? (ခြေအိပ်နက်နဲ့မွန်ဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ရှမ်းဝတ်စုံ၊ ကုတ်နဲ့ ကရင်ဝတ်စုံ၊ နက်ကတိုင်+ကုတ်+ရှူးနဲ့ ချင်းဝတ်စုံ၊ ရှူးနဲ့ ကချင်ဝတ်စုံ) ဒီမြန်မာလူငယ်တွေက ဘာလို့ ASS (ဖင်) လို့ ဒီမှာ လာရေးရတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီဆိုတာ ဒါလား?? လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဟော်ဟစ်ဆဲဆိုတာ ဒီမိုကရေစီလား ?? လွတ်လွတ်လပ်လပ် ညစ်ညမ်းတဲ့ အပြုအမူကို လုပ်ပြတာ ဒီမိုကရေစီလား ?? ဒါက ဘာလုပ်နေတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီအတွက်ပဲလား?? ဒီလူတွေကရော ဘာလုပ်ကြတာလဲ?? ဒီမိုကရေစီ အတွက်ပဲလား?? ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ဒီအလုပ်လုပ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ??
အရှက်မရှိ ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ပြီး လမ်းပေါ်ထွက်အော်တာ ဒီမိုကရေစီလား ?? ။ ဒီလူကြီးကို ဘယ်သူတွေက ကိုယ်လုံးတီးချွတ်ခိုင်းတာလဲ?? ဘာအတွက်လဲ?? ဒီကောင်မလေး မဆုမွန် ကို ဘယ်သူက ဘုန်းကြီးနဲ့ အတင်းကြိုက်ခိုင်းတာလဲ?? ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ဘယ်သူအတင်းရိုက်ပြီး ရုရှားကို သွားခိုင်းတာလဲ?? ဒီကောင်မလေး (မဗေဒါ သမီး မေကိုလတ်) ကို ထိန်းခဲ့တဲ့ ငယ်နိုင် က အဲ့လိုနေဖို့ သင်ပေးလိုက်တာလား?? ဒီလူတွေက ဘယ်အမျိုးနွယ်က ဆင်းသက်ပြီး နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ??
။ ဒီကလေးစစ်သားတွေကမြန်မာစစ်တပ်ကလား ??